भर्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्रहरी बीच झ' डप ! प्रहरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे पछि रि'सले आगो -
Home News भर्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्रहरी बीच झ’ डप ! प्रहरीले गाडीमा...
भर्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्रहरी बीच झ’ डप ! प्रहरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे पछि रि’सले आगो
भ’र्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्र’हरी बीच झ’डप ! प्र’हरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे, रि’सले आ’गो
काठमाडौ । मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक नदी र सूर्यदेवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठपर्व आजदेखि शुरु भएको छ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म चार दिन मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व आज स्नान गरी चोखो खाएर बसिन्छ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन आज बिहान बर्तालुले स्नान गरेसँगै यो पर्वको विधि शुरु हुन्छ । चतुर्थीको कर्मलाई अरबाइन वा अरबा भनिन्छ । यस दिनदेखि छठपर्व नसकिएसम्म बर्तालुले माछा, मासु, लसुन, कोदो, फापर, मुसुरो, आदि नखाने विधि छ ।
Previous articleभ’र्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्र’हरी बीच झ’डप ! प्र’हरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे, रि’सले आ’गो
Next articleबालुवा सिमेन्ट बोक्ने सुन्दरी बहिनिको स्वरले रु’वायो आज ! १२ घण्टा लेबर काम गरेर गायिका बन्ने सपना (भिडियो हेर्नुहोस् र धेरै सेयर गरि सहयोग गर्नुहोला)